Qorshaynta iyo la-yeelashada 'hadalka' ku saabsan doorashooyinka daryeelka qofka aad jeceshahay - Cunnada Ku-Taagga
Dadka qaangaarka ah badankood, doonista adag iyo madax-bannaanida ayaa aasaas u ahaa nolosha guuleysiga. In kasta oo kuwani ay yihiin qiyamyo adag, xarriiqdaas madaxbannaan ayaa jidka ku dhici karta markay tahay aqbalidda caawimaadda. Daryeel bixiyeyaal badan ayaa la kulmi doona xannibaaddaan bilowga ah markay kala hadlayaan xulashooyinka daryeelka kuwa ay jecel yihiin.
Marka lagu daro in si wadajir ah loo wada dabaaldego maalmaha ciidaha, kulannada qoysku waxay soo bandhigi karaan waqtiga ugu habboon ee lagu hubin karo si loo arko sida xubnaha qoysku u duqoobayaan. Qaar baa laga yaabaa inay ogaadaan in hooyo, aabe, ayeeyo ama ayeeyo ay isticmaali karaan xoogaa caawinaad dheeraad ah xagga cuntada, gaadiidka, shaqooyinka ama daryeelka shakhsiga ah.
Ku bilow kormeerid
Ciidaha ayaa waqti kuu siinaya adiga iyo xubnaha kale ee qoyska inaad iska hubisaan qof aad jeceshahay oo aad ka baqeyso inuu dhibaato ku qabo kaligiis. Waxaad ku sameyn kartaa tan si aan shaki ku jirin labadaba adoo weydiinaya su'aalo furan iyo indho indheyn haddii aad booqaneysid guriga qofka la jecel yahay. Qaboojiyaha ma buuxaa? Howlaha guriga sida majarafadda barafka miyaa la qabanayaa? Qofka aad jeceshahay si nabad ah ma ku heli karaa meel kasta oo ay ugu baahan tahay gurigeeda?
Barb Kuklock, calaamadda hooyadeed Elaine u baahan tahay caawimaad ayaa timid markii qoysku arkay inay joojisay diyaarinta cuntada nafteeda. - Waxaan ogaanay inaysan si fiican wax u cunin, ayuu yiri Barb. Taasi waxay ku kaliftay Barb iyo afar walaasheed inay ka wada hadlaan waxa laga qaban karo dhibaatada. Waxay yimaadeen Meals on Wheels iyagoo xal u noqon kara helitaanka Elaine, oo ku nool Plymouth, cunooyin nafaqo leh maalin kasta.
Isbeddelada cuntada ayaa ah mid ka mid ah calaamadaha badan ee qofka aad jeceshahay ee gaboobay uu u baahan karo xoogaa gargaar ah. Kediska waxaad ku qaadan kartaa www.mnlivewellathome.org si aad wax uga barato calaamadaha kale ee qofka aad jeceshahay u baahan karaan caawimaad.
Ku hel qof walba isla bogga
Haddii aad u maleyneyso in qofka aad jeceshahay uu ka faa'iideysan karo Cunnooyinka Cagafyada ama adeeg kale oo ka caawiya dadka waayeelka ah ama dadka naafada ah inay guryahooda joogaan, bilaw wadahadalka xubnaha qoyskaaga. La yeelashada wada hadalka qofka aad jeceshahay way fududaan doontaa haddii aad dhammaantiin isku raacsan tihiin xulashooyinka daryeelka suurtogalka ah.
Barb waxay tiri waa muhiim dhamaan shanta walaalo ineey kawada hadlaan sida ugufiican ee hooyadooda loogu wajihi karo cuntada. Ninkeeda Elaine wuxuu ku dhintey isagoo da 'yar, sidaa darteed waxay si fiican ula qabsatey inay si madax banaan u noolaato. - Uma malaynayo inuu qofna aad ugu faraxsan yahay inuu u baahdo caawimaad, ayuu yidhi Barb. Carruurtu way ogaayeen inay u baahan yihiin inay wax yar uun ku abuurtaan qaabka ay ugu soo bandhigeen ikhtiyaarka ah inay cunnooyin u helaan hooyadood.
Adeegso hab debecsan
Qofna, iyadoo aan loo eegin da'da, jecel yahay in loo sheego waxa la qabanayo. Si loo kordhiyo fursadahaaga guusha, habkaaga waa inuu noqdaa mid laba dhinac ah iyo wada hadal, halkii aad ka ahaan laheyd faragelin. Waa kuwan qaar fikradaha bilowga wada hadalka ka ah eldercarelink.com. Mawduuc guud oo wanaagsan oo la raaco ayaa ah in la garto qofka aad jeceshahay fikraddiisa ah inuu si wanaagsan u gaboobayo, isla markaana laga wada hadlo xulashooyinka lagu gaaro himiladaas si wadajir ah.
Barb iyo walaalaheed waxay go aansadeen inay si wada jir ah isugu duubnaadaan si ay Elaine Meals on Wheels u siiso hadiyad Kirismas ah. Tan iyo markii ay u iibsan lahaayeen hadiyad Kirismas ah, tani waxay Elaine siisay xasillooni maskaxeed iyada oo carruurteeda aysan qarash dheeraad ah ku bixinaynin inay cunto siiso. Xusuusin: In kasta oo aan ka codsan karno tabarucaadka cuntada kuwa awoodda u leh, qiimaha cuntadu wuxuu ku saleysan yahay baahi.
"Hal fure ayaa noo ah inaan ku bilowno inaan u sheegno inaan isku dayayno oo kaliya mana ahan inay sii wadato helitaanka cuntada haddii aysan jeclayn," ayuu yiri Barb. Xaqiiqdii, Elaine way tijaabisay cuntooyinka, iyaduna way qaabilaysay ku dhowaad 8 sano hadda. "Waligeed isma dhiibi doonto," ayuu yiri Barb.
Xeeldheerayaasha daryeelka ayaa isku raacay in inta badan aysan ahayn kaliya hal hadal oo keenaya xalka daryeelka. Waa wadahadal socda isla markaana go'aan qaadasho wadajir ah ayaa keenta natiijooyinka ugu fiican. Qorshayaasha ka caawiya qofka aad jeceshahay inuu si madax-bannaan ugu noolaado si wanaagsan ayaa loo wada sameeyaa, inta badanna waxay qaadataa wadahadal aan la daaweyn karin oo horay loogu socdo.
Haddii aad qorsheyneyso inaad kala hadasho qofka aad jeceshahay ee ku saabsan Cuntooyinka Lugaha Lugta ama adeeg kasta oo kale xilliyada ciidaha, waxay kaa caawinaysaa inaad hesho macluumaad aad wadaagi karto. Raadi jawaabaha ugu badan su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan helitaanka cuntada boggayaga internetka, daabac buug yar in la wadaago, ama nala soo xiriir inaad codsato buug-yare ama aad weydiiso su'aal kasta oo aad qabtid.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Elaine iyo waxa ay ka jeceshahay Cuntada Lugaha Lugta.